အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အဆင့် ၇ ဆင့် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, မေလ 5, 2014 အင်္ဂါနေ့, မေလ 6, 2014 Douglas Karr
၎င်းသည်ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏တန်ဖိုးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းမဖြစ်သင့်ပါ။ သင်၏လုပ်ငန်းသည်အလားအလာကောင်းများကိုအာရုံစိုက်လာစေပြီးသင်၏အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းတို့ကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးနောက်ဆုံးတွင်သင်၏အတွင်းနှင့်အပြင်သို့သွားသောစျေးကွက်လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်သော၎င်း မှနေ၍ စီးဆင်းနေသောအကြောင်းအရာများကိုပုံမှန်စီးဆင်းရန်လိုအပ်သည်။ ဒီကနေအံ့သြစရာမရှိပါ Smart Insights ကနေ infographic - သို့သော်တည်ဆောက်ခြင်း ယှဉ်ပြိုင်မှုအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ ကြင်ဒီလွယ်ကူသောစာဖတ်သူကို infographic အတွက်ရေးဆွဲထားသည်။
သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မည်မျှယှဉ်ပြိုင်နိုင်ကြောင်းသင်သုံးသပ်ရန်သို့မဟုတ်စစ်ဆေးရန်ကူညီရန်၊ အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်အဆင့်တိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့သုတေသနမှသက်ဆိုင်ရာသုတေသနကိုကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၂၀၁၄ သုတေသနအစီရင်ခံစာတွင်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းကိုစီမံခြင်း နှင့်အတူဖန်တီးစမတ် Insights HubSpot.
အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အဆင့် ၇ ဆင့်
ဖောက်သည်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုနားလည်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ အကြောင်းအရာကနေ။
စမတ်လုပ်ပါ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၌တည်၏။
အကောင်းဆုံးကိုရွေးပါ ရောနှော အရင်းအမြစ်များ။
အထိရောက်ဆုံးအကြောင်းအရာဖန်တီးပါ ကို formats.
အသုံး analytics ROI နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အဘိုး.
Webinar သတိပေးချက် - ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းမှတစ်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်း